အဘယ်အရာကိုအဆိုပါမီးရထားလက်မှတ်ကြိုတင်မှာယူမှုအကြောင်းသိထားရန် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား > အဘယ်အရာကိုအဆိုပါမီးရထားလက်မှတ်ကြိုတင်မှာယူမှုအကြောင်းသိထားရန်
နေ့တိုင်းပြုလုပ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကြည့်ဖို့ဘုံမျက်မှောက်ဖြစ်ပါသည် ခရီးသည် အဆိုပါရထားလမ်းကို အသုံးပြု.. ထို့ကြောင့်, ဒါကြောင့်အံ့ဩစရာမရှိဖြစ်ပါတယ်, အဆိုပါရထားလမ်းတိုင်းပြည်၏အသက်သွေးကြောအဖြစ်လူသိများကြသည်. မပါဘဲ, သူတို့ကြီးမားပရမ်းပတာဖြစ်နိုင်ပြီးကြောင့်ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်ပြင်းထန်သောပြဿနာများကိုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သည့်.
သူကပြောပါတယ်ဘဲလျက်, အဆိုပါလက်မှတ်များ၏ရရှိမှုဖြစ်ပျက်သောအချိန်ဟာအဓိကပြဿနာဖြစ်လာ. သင်သည်သင်၏လက်မှတ်များစာအုပ်ဆိုင်ချင်သည့်အခါ, သင်လက်မှတ်တွေရရှိနိုင်ခြင်းနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းသေချာဖို့လိုတယ်.
သငျသညျရထားလမ်းလက်မှတ်ကြိုတင်မှာယူမှုအတွက်နည်းပြအမျိုးမျိုးရှိတယ်. သူတို့ဟာကွှငျးမဲ့ဖြစ်ကြ. အဆိုပါကွှငျးမဲ့များသောအားဖြင့်အများဆုံးဖြစ်ပါသည် ပြည့်ကျပ်သော ခရီးသည်ကဒီအခန်းမှာသူတို့ရဲ့လက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့.
ပွဲတော်ကြိမ်စဉ်အတွင်း, အဲဒါကိုမခံနိုင်သောဖြစ်လာသည်နှင့်ရထားအပေါ်ခရီးသွားလာလူများ၏အရေအတွက်ကိုအလွယ်တကူအများအပြားရာပေါင်းများစွာကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်. သငျသညျသကျကွီးရှယျအိုမြားပိုင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာရှိပါက, ထို့နောက်သူကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် တစ်ယူထားတဲ့ရထားအတွက်စာအုပ် အခန်းထက်ကွှငျးမဲ့.
အခန်းရဲ့နောက်မျိုးဟာအိပ်ပျော်နည်းပြဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါအိပ်ပျော်နည်းပြနာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ဝင်အဖြစ်သင်သည်သင်၏လျှောက်လုံးအပန်းဖြေခြင်းနှင့်အိပ်ဖွ ခရီးသွားခြင်း. တစ်ခုချင်းစီကိုရထားကအနည်းဆုံးနှင့်တကွကြွလာ 10 ဖြစ်ကြောင်း bogies အိပ်ပျော်နည်းပြ.
သငျသညျချင်တယ်ဆိုရင်သင်ဟာသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခေါင်းအုံးနှင့်အိပ်ရာစာရွက်ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်. ဘတ်ဂျက်အပေါ်ခရီးသွားလာနေသောသောသူတို့အဘို့စံပြ. အဆိုပါအိပ်ပျော်3ဆင့် AC အအခန်းအဆင်ပြေသည်နှင့်အနည်းငယ်အိပ်ပျော်နည်းပြအထက်တွင်ဖြစ်ပါသည် မီးရထားလက်မှတ်ကြိုတင်မှာယူမှု.
အဆိုပါအိပ်ပျော်နည်းပြနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာသူတို့က AC အရှိသည်ကြောင့်သူတို့ကအနည်းငယ်စျေးကြီးတယ်. အဆိုပါ 2-tier AC အအခန်းခရီးသွားနောက်ထပ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာဖြစ်ပါသည် အဆင်ပြေ သငျတို့သကြီးမားနှင့်အတူပေးအပ်ကြသည် ဇိမ်ခံ.
အလားတူပထမဦးဆုံးအတန်းအစား AC အအခန်းအကြောင်းကိုဟုဆိုနိုငျ. သငျသညျ privacy ကိုမျိုးနှင့်အတူပေးအပ်ကြသည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, အရာသင်အလိုရှိ. ဒါဟာနယ်လှည့်များ၏စျေးအကြီးဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. နောက်ဆုံးအနေနဲ့, အဆိုပါကုလားထိုင်ကားတစ်စီး.
သငျသညျအတိုအကွာအဝေးခရီးသွားလာကြသောအခါ, ထို့နောက်သင်ကုလားထိုင်ကားတစ်စီးကို အသုံးပြု. သွားလာနိုင်ပါတယ်. အဆိုပါပုံမှန်အတိုင်းပထမဦးဆုံးအတန်းအစား AC အထက်ပြောင်များမှာ မီးရထားလက်မှတ်ကြိုတင်မှာကြားထား. သို့သျောလညျး, သင်ထိုင်ခုံ SMS ကိုတပ်လှန့်မှတဆင့်ရရှိနိုင်ပါသို့မဟုတ်သေချာချင်ပါလိမ့်မယ် အွန်လိုင်း စစ်ဆေးခြင်း.
အဆိုပါ PNR အသုံးပြုခြင်း, သင်သည်သင်၏လက်မှတ်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်ကြောင်းသေချာစေရန်နိုင်ပါတယ်. နောက်ဆုံး, သင်ထိုင်ခုံမရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့မြင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်. သင်နောက်ထပ်လုပ်ရှေ့တော်၌ထို PNR status ကိုသေချာအားဖြင့်မှန်ကန်သည်ဟုလုပျနိုငျ မီးရထားလက်မှတ်ကြိုတင်မှာယူမှု ကြိုတင်စာရင်းသွင်း.
ထုံးစံအတိုင်း, တူသောအချက်အလက်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရင်းအမြစ်ကိုအသုံးပြုပြီးသင့်ရဲ့ကြိုတင်ပြုပါ တစ်ဦးကရထား Save.
သင်သည်သင်၏ site ကိုမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fall-you-need-to-know-about-the-railway-ticket-reservation%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#ကြိုးဝိုင်းသစ်တော ရထားလမ်း လက်မှတ်တွေ ရထား